Fitsidihana tao Antsohihy | Primature
Fitsidihana tao Antsohihy
Mahazoarivo, ny 24 aprily 2021 – Manoloana ny fihanaky ny valanaretina covid-19 dia nanamafy ny fepetra hiadiana amin’izany ny ao amin’ny Faritra Sofia, ka tonga nitsidika ny tananan’Antsohihy ny Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany maraina, nijery ifotony ny fomba hanatevenana ny ady sy ny mety ho fanampiana horaisin’ny fanjakana an-tanana.
Namory ireo tompon’andrakitra rehetra miasa eo anivon’ny Faritra Sofia ny Praiminisitra, ao anatin’izany ireo olom-boatendry sy olom-boafidy, mba handraisana fanapahan-kevitra miaraka momban’ny toe-java misy ao amin’ity Faritra ity. Nomarihin’ny Praiminisitra fa tao anatin’ny roa herinandro dia niakatra be ny isan’ny tranga vaovao amin’ny aretina covid-19, izay heverina fa mbola hitombo ihany amin’ny herindro manaraka, ka nohazavainy fa mitady hevitra hanakaikezana ny vahoaka hatrany ny fitondram-panjakana eo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Repoblika, ary mijery ny hanatsaràna ny ady, sy ny hahafahana miady amin’ny fomba maharitra. Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra izao fivoriana izao ny hanampiana ny fampitaovana any amin’ireo hopitaly, toy ny fandriana sy ny fahafahana mitily ny valanaretina ao anatin’ny fotoana fohy. Efa nampahafantarina an’ireo hopitaly tsy miankina kosa, hoy ihany ny Praiminisitra, fa ankehitriny dia misy ny fenitra tokony harahina amin’ny fitsaboana rehefa hita fa misy soritr’aretina. Mila fandrindràna izany mba hisorohana ny fiafaran’ireo mitondra ny otrikaretina amin’ny faharariana mafy, hoy izy.
Napetraky ny Lehiben’ny governemanta ny toromarika androany, ary dia hovorian’ireo tompon’andrakitra aty amin’ny Faritra, amin’ny herinandro ho avy izao, ny mpanjinjara fanafody sy mpitsabo ao amin’ny CSB, ary ireo mpitsabo rehetra tsy miankina amin’ny fanjakana, handaminana ny zavatra rehetra mifandraika amin’ny fanarahana fenitra fitsaboana. Heverina, hoy izy, fa rehefa milamina ny fandrindrana ny asa dia ho mora ny hahitana vokany ao anatin’ny fotoana fohy.
Nomarihin’ny Praiminisitra fa ankoatra ny resaka fitsaboana dia zava-dehibe ihany koa ny fiambenana ny sisin-dranomasin’i Madagasikara, indrindra amin’ireo faritra ahiana hivezivezen’ny olona avy any ivelany, toa an’Analalalava hatrany Maromandia, mba hisorohana ny fidiran’ny valanaretina, ho fiarovana ny ain’ny vahoaka any amin’ny Faritra Sofia. Amin’izao fotoana izao dia efa mitondra sambo sy miaramila manatanteraka ny fisafoana ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena, hoy ny tenany.
Mahakasika ny dina kosa dia nambaran’ny Praiminisitra fa ilaina ny fifanomezan-tanana sy ny fifamenoana eo amin’ny vahoaka aty ifotony sy ny tompon’andraikitry ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Notsiahiviny fa teo ambany fitarihan’ny governora, dia efa nanao ezaka nanitsy ny dina teo aloha mba hifanaraka amin’ny lalàna velona misy eto amintsika, ireo tompon’andraikitra aty amin’ny Faritra. Nomarihiny fa napetraka tamin’ny fomba ofisialy androany ny dina vaovao “malainkalatra” any amin’ny Faritra Sofia, ary inoana sy antenaina fa hampiasain’ny vahoaka handaminana ny fandriampahalemana sy filaminana ao anatin’ny Faritra izany, ary ao anatin’ny fanajàna ny lalàna ihany koa.
Teo am-pamaranana dia nisaotra manokana an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Faritra Sofia, na olom-boatendry izany na olom-boafidy, ary ireo mpiasan’ny fahasalamana sy mpitandro ny filaminana, tamin’ny fanapahan-kevitra maro isan-karazany izay noraisin’izy ireo mba hiadiana amin’izao valanaretina izao, ny Praiminisitra. Hita taratra teto ny fifamenoana eo amin’ny asa rehetra. Betsaka, hoy izy, ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fitsidihana ny Faritra, ary mitondra ny anjara birikiny ny fanjakana foibe, fa saingy miankina amin’ny aty an-toerana ny fahatanterahan’ny ezaka kasaina.
Fitsidihan’ny Ambasadaoron’i Russie ara-pomba fifanajàna →
Fametrahana lamina ho fiadiana amin’ny fihanaky ny valan’aretina Covid-19 ao Analanjirofo
Fitsidihana tany amin’ny tapany Atsimon’i Madagasikara